Gudoomiyaha gobolka Kırıkkale Kolat wuxuu booqday Goobta Dhismaha ee YHT (Sawir Qaade) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia71 KirikkaleGuddoomiyaha Gobolka Kirkuk Kale Kolat ayaa booqday dhismaha YHT (Sawir Sawir)
28 / 08 / 2013 71 Kirikkale, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Kirikkale Guddoomiyaha Kolat YHT Booqashada Site: Guddoomiyaha Kırıkkale Ali Kolat, Balışeyh Magaalo İzzettin tuulada halkaas oo tareen Xawaaraha Sare (YHT) booqday goobta dhismaha, Maareeyaha Mashruuca Sukru heleen xog Yufraad.
Firat, ayaa ku sheegay war qoraal ah, Ankara-Kayas, oo ka baxday Kırıkkale, mashruuca Etiler Mahallesi'a si ay u qabato illaa iyo inta laga gaarayo marxaladda hindisaha, ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in shaqooyinka shirkadahooda ay ka bilaabeen Quarterly Etiler iyo in ay ku saabsantahay dhererka 79.625 illaa degmada Yozgat Yerköy.
Mashruuca, 21 Janaayo 2013 oo ka bilaabmay Duufaanta, wuxuu yiri:
Mashruuca Lira wuxuu ku baxayaa 398 million 437 kun oo xNUMX ah. 163 million 13 kun kiilo mitir oo dhagax ah oo laga sameeyay goobta mashruuca, 500 million 7 kun kiilo mitir ayaa la buuxin doonaa. Mashruuca mashruuca waxaa ka mid ah tunnel 600, 7 viaduct, buundada 6, 6 overpass, 12 hoosteeda iyo dhismaha 49. Mashruuca, shaqaalaha 131 waxaa loo shaqeyn doonaa iyada oo ku xiran goobta dhismaha. Gawaarida 458 way socdaan. Hirgelinta jireed ee lagu qorsheeyey shaqada mashruuca ayaa la qabtay. Ujeedada ugu weyn ee mashruuca waa in la casriyeeyo waddada taariikhiga ah ee Halbeegga ah oo leh Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare iyo dib u furo. Shaqada mashruucan ka dhexeeya Yozgat-Yerkoy iyo Sivas ayaa si xoog leh u socda. Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Karaawkale wuxuu sii socdaa sidii loo qorsheeyay.
Guddoomiye Ku-xigeen, oo baaray tunnel-ka joogtada ah ee aagga Tuulikada Tuulada, ayaa sheegay in mitirka 864 dhererka tareenka leh qaab dhismeedka jireed ee 45.
Ik Waxaan daawaday shaqada tareenka xawaaraha sare maanta. Waxaan aragnay shaqada shirkada la xiriira. Runtii si dhakhso ah ayuu u socdaa. Oo hadda mashruucuna wuxuu ka bilaabmayaa xaafadda Etiler ee magaalada Kilikkale. 79 km ayaa sii waday shaqada, shaqada degdegga ah. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay tunnel, buundooyin. Waxay sii socotaa si degdeg ah. Waxaan u rajeynayaa guulaha shirkadda iyo shirkada kale ee shirkadda leh. Tareenka deg-degga ahi waa mashruuc aad u muhiim ah oo aad u fiican oo mustaqbalka dalkeenna ah. Aad baan ugu faraxsanahay in daraasaddan ay si deg deg ah uga sii socoto gobolka. Waxaan u raaci doonaa shaqada waqti ka waqti, waanu raaci doonaa; ku saabsan horumarinta, waxaan ku siin doonaa taageerada lagama maarmaanka ah ee ku saabsan dhibaatooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo shirkadda, shaqaalaha iyo shaqaalaha.
Guddoomiyaha Gobolka Kırıkkale Haktankçmaz Baaritaanada YHT Studies Place
Ardayda Jaamacadda Aalborg ayaa booqday IETT (Sawir Sawir)
Mashruuca tareenka xawaaraha sare leh ee Kirikkale
Guddoomiyaha Gobolka Kırıkkale Kolat
goobta dhismaha tareenka xawaaraha sare
Dhismaha dhismaha YHT
Wakaaladda Ciraaqiyiinta ee Ciraaq